Akhriso: Itoobiya oo markii labaad ku dhaqaaqday go’aan culus oo ay ugu careysiisay dowladda farmaajo | Kismaayo24 News Agency
Akhriso: Itoobiya oo markii labaad ku dhaqaaqday go’aan culus oo ay ugu careysiisay dowladda farmaajo
Thursday May 18, 2017 - 5:37 under Somali News by Tifaftiraha K24
Dowladda itoobiya ayaa hambalyo usoo dirtay maamulka soomaliland taasi oo ku aadan maalinta gooni u goosadka maamulka soomaliland ee 18-ka may.
Qunsuulka Ethiopia ee magaalada Hargeysa gen.Berhe Tesfaye ayaa qoraal kooban uu soo saaray waxaa uu hambalyo ugu daray maamulka iyo shacabka soomaliland xuska maalinta soomaliland ay sheegtay in soomalia inteeda kale ay ka go’day.
“Anigoo ku hadlaya magaca xafiiska qunsuuliyada Ethiopia ee Somaliland iyo kaygaba waxaan hambalya udirayaa anigaa sii marinaya wasaarada arimaha dibada dowlada iyo shacabka Somaliland anigoo ugu hambalyeenaya maalinta qaranimada Somaliland ee ku beegan 18ka May ee 2017.Anigoo ku kalsoon inuu sii kobci doono xidhiidhka saaxiibtinimo ee labada dal waxaan urajeynayaa horumar iyo Barwaaqo shacabka Somaliland,” ayuu qunsuulku kuyidhi qoraalka.
Arintaan ayaa waxa ay meel ka dhac weyn ku tahay madax banaanida iyo qarannimada soomalia waxaana itoobiya tan iyo wixii ka dambeeyay markii saami laga siiyay dekedda berbera ay bilowday in soomaliland ay waxyaabo badan u sameyo amaba ay si dadban u muujiso in soomaliland ay u aqoonsantahay dal ka madax banaan soomalia.
Dhawaan ayey dowladda itoobiya waxa ay dhismo weyn ku wareejisay safaarad la sheegay in soomaliland ay ku leedahay addis ababa waxaana dhismahas lagu qoray qoraal lagu muujinaayo in soomaliland safaarad rasmi ah ay ku leedahay addis ababa.
Dhamaan ficiladaan ay itoobiya ku kaceyso ayaa waxa ay muujinayaan in ra’isul wasaaraha itoobiya uu ka baxay heshiiskii addis ababa kula galay madaxweyne farmaajo waxaana qodobadii lagu heshiiyay kamid ahaay in itoobiya aysan ku xadgudbi doonin madax banaanida iyo qaranimada soomalia.